ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ အဓိကမိန်းက ဘာလဲ (မြန်မာအင်္ဂလိပ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ အဓိကမိန်းက ဘာလဲ (မြန်မာအင်္ဂလိပ်)
ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ရဲ့ အဓိကမိန်းက ဘာလဲ (မြန်မာအင်္ဂလိပ်)
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Mar 26, 2012 in Copy/Paste |4comments
အရင်ကတော့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်သေးလို့ အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့ဟာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်မဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ခု နောက်ပိုင်းတော့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်း အားထုတ်မှုများလာတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့အရာများကို အင်္ဂလိပ်လို ကိုယ်တက်ကျွမ်းသလောက် ဖြေဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇင်းလည်း VOA သတင်းဌာနက အင်တာဗျုးလွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားလူမျိုးတွေကပါ အင်္ဂလိပ်လို မေးခွန်းတွေ မေးလ်ထဲ ရောက်ရောက်လာပါတယ်။ မိမိက မြန်မာပြည်ပြန်ခွင့်တောင်းထားလို့ ကျမ်းစစ်ဆရာက ကျမ်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေကို နေ့စဉ်တွေ့ဆုံးပြီး စဉ်းစားမိတိုင်း ပြောဆိုနိုင်အောင်ဆိုပြီး နေ့စဉ်တက္ကသိုလ်ကို ခေါ်နေလို့ သွားနေရပါတယ်။ အဲဒီလို အလုပ်များနေပေမဲ့ ဘာသာခြားများရဲ့ ဘာသာရေးဆွေးနွေးမေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြာပေးမှု၊ ဂျာနယ်မှာ ဆောင်းပါးရေးပေးမှု၊ မိမိတို့ဘာသာဝင်များ သိချင်တာများကို ဖြေကြားပေးမှု၊ တိုင်းတစ်ပါးသားများရဲ့ အင်္ဂလိပ်မေးခွန်းများကို တက်နိုင်သမျှ ဖြေကြားပေးမှုတို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇင်းမြန်မာပြည်ပြန်ကို ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့ပြန်ရင် တည်းမဲ့လိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်ရမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို အွန်လိုင်းမသုံးဖြစ်ရင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရအောင်ဆိုပြီး ဘာသာခြားများကပါ မေးမေးနေကြတာနဲ့ ဦးဇင်းကို ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဦးဇင်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က 09-43910411 ပါ။ ဦးဇင်းကိုသိချင်တာ မေးချင်လို့ဖြစ်စေ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ တွေ့ဖူးချင်လို့ဖြစ်စေ မည်သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်က ဦးဇင်းအတွက် ဒကာမတစ်ယောက်မှ တစ်ခါသုံးကဒ်ဖုန်းကို ၀ယ်ပေးထားတာမို့ တကယ်လို့များ ကဒ်ကုန်လို့ ဆက်မရရင် ကျောင်းဖုန်းဖြစ်တဲ့ 01-430216 ကိုဆက်ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးဇင်း ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့ကနေ မေလ(၁၅)ရက်နေ့ထိ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
I am going to describe useful attitude for all religion. When you know for yourselves that certain things are wrong, unwholesome, bad, then give them up; when you know for yourselves that certain things are right, wholesome, good, then accept them, follow them.”
7. Do not believe something because it appeals to “common sense.”
1. “‘Suppose there isahereafter and there isafruit, result, of deeds done well or ill. Then it is possible that at the dissolution of the body after death, I shall arise in the heavenly world, which is possessed of the state of bliss.’ This is the first solace found by him.
2. “‘Suppose there is no hereafter and there is no fruit, no result, of deeds done well or ill. Yet in this world, here and now, free from hatred, free from malice, safe and sound, and happy, I keep myself.’ This is the second solace found by him.
3. “‘Suppose evil (results) befall an evil-doer. I, however, think of doing evil to no one. Then, how can ill (results) affect me who do no evil deed?’ This is the third solace found by him.
4. “‘Suppose evil (results) do not befall an evil-doer. Then I see myself purified in any case.’ This is the fourth solace found by him.
ဦးဇင်းနဲ့ ဖလှယ် ဆွေးနွေးဖို့ တပည့်တော် မရဲလို့ပါဘုရား…။
ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အဓိက မိန်းက ဘာသာတရားနဲ့အညီ ကျင့်ကြံ
နေထိုင်တတ်ဖို့ လို့ ထင်မြင်နေမိပါတယ် ဘုရား…။
ဦးဇင်းကို ရွှေကြည် စိတ်ကရည်မှန်းပြီး ၀တ်ဖြည့်ပါရစေဘုရား။ ဦးဇင်းရဲ့အချက်(၄)ချက်ဖြစ်တဲ့
(၁။ နောက်ဘ၀ရှိလို့ ကောင်းမှုမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ကို ခံစားရရင်လည်း မိမိဟာ ကောင်းတာ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကောင်းကျိုးကိုပဲ ခံစားရမှာမို့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလို။
၄။ နောက်ဘ၀မှာ မကောင်းမှုဒဏ်အကျိုးပေး မရှိရင်လည်း မိမိဟာ မကောင်းတာမလုပ်တဲ့အတွက် မျက်မှောက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစွာနေရတာမို့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလို။့
ဆိုတာကို တပည့်တော်မ လေးစားကြည်ညိုစွာနဲ့ နာယူမှတ်သားထားပါ့မယ် ဘုရား။
အရှင်ဘုရား ဒီလိုရဲရဲ မိန့်တာမျိုးတွေ မြန်မာcommunity ထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဝင်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေပါဘဲ။ မျက်စေ့မှိတ်ပြီး၊ ကောဠာဟလ နောက်လိုက်ရာမှာ ပြိုင်စံရှားတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရဲ့ မိရိုးဖလာလိုလို၊ဘာလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ အယူအဆမှားတွေ ပြင်ယူရဘို့ အချိန်အတော်ယူရအုံးမှာပါ။
အရှင်ဘုရား တို့လို ဟောနိုင်ပြောနိုင်ရှင်းပြနိုင်သူတွေ စာပေ နဲ့ မီဒီယာလောကထဲ များများနဲ့ မြန်မြန်ဝင်လာဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
MG မှာ ပုံမှန် ၀င် မိန့်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ် ဘုရား…။